News – Page 990 – Puntland Voice
Madaxweyne Shariif oo sheegay inay hirgaliyeen qeyb ka mid ah heshiiskii ay la galeen Ururka Ahlu suna
Muqdisho (AB):-Madaxweynaha Dowlada KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sh.Axmed ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xubnihii Golaha wasiirada loogu daray Ururka Ahlu suna waxaana uu sheegay qeyb ka mid ah heshiisyadii ay la galeen Ahlu suna ay Dowladu fulisay. Madaxweyne Shariif […]
Qaraxyo xalay ka dhacay gudaha iyo afaafka hore ee Dekada Magaalada Muqdisho.
Muqdisho (AB):-Bac waxyaabaha qarxa laga soo buuxshay ayaa la sheegay in xalay lagu qarxiyay gudaha Dekada Muqdisho kaasoo ilaa iminka an la ogeyn khasaaraha uu gaystay. Mid ka mid ah Saraakiisha Boliiska ee Dekada Muqdisho ku sugan magaciisana ku soo […]
Maamulka Magaalada Baydhabo oo dil toogasho ah ku fuliyay nin ku eedeysnaa basaasnimo
Baydhabo (AB):- Wararka laga helayo Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Bay ayaa sheegay in Maamulka halkaasi ka jira uu xukun dil ah ku fuliyay nin lagu eedeeyay inuu jaasuus u ahaa Dowlada Itoobiya. Garoonka kubada lagu cayaaro ee Dr.Ayuub Magaalada […]
Weerar xalay lagu qaaday Ciidamada Midowga Afrika ee ku jira dhismaha Kuliyadii Jaale Siyaad
Muqdisho (AB):-Dagaal qaraar oo waqti kooban socday ayaa xalay Magaalada Muqdisho ku dhexmaray ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab. Dagaalka oo ka dhacay kuliyadii Jaale Siyaad ayaa yimid kadib markii Mujaahidiinta Alshabaab ay weerat kedis ah ku qaadeen ciidamada Burindi ee ku […]
Maamulka ,Ganacsatada iyo Nabadoonada Magaalada Boosaaso oo Maanta kulan ka yeeshay lacagaha faalsada ah ee la soo gaarsiiyay Gaalkacyo.
Boosaaso (AB):-Kulan balaaran oo si weyn looga soo shaqeeyay ayaa Maanta Magaalada Boosaaso waxaa uu ku dhexmaray Maamulka,Nabadoonada iyo Ganacsatada Magaaladaasi,waxaana looga hadlayay sidii go’aan looga qaadan lahaa lacago faalso ah oo dhawaan Magaalada Gaalkacyo la soo gaarsiiyay. Mas’uuliyiinta Boosaaso,ganacsaytada […]
Madaafiic dhimasho iyo dhaawac sababay oo barqanimadaan lagu garaacay Xaafado ka tirsan Degmooyinka Magaalada Muqdisho
Muqdisho (AB):-Madaafiic dhowr qofood ku geeriyoodeen kuwana ku dhaawacmeen ayaa Maanta lagu garaacay xaafado ka mid ah Magaalada Muqdisho gaar ahaan dhanka Waqooyi ee Magaalada. Madaafiicda oo dhanka Ciidamada AMISOM ka yimid ayaa waxaa ay ku hoobteen xaafadaha degmooyinka Kaaraan […]
Wasiirka Warfaafinta Dowlada Eritrea oo sheegay inaysan waxba soo kordhineyn ciidamo shisheeye oo Soomaaliya la geeyo xiligaan
War ka soo baxay Wasiirka Warfaafinta Dowlada Eritrea Cali Cabdow ayuu kaga hadlay go’aankii Hogaamiyayaasha Urur Goboleedka IGAD kaasoo ahaa in ciidamada dersika loo soo diro Soomaaliya,waxaana carabka ku dhuftay inay arintaasi sii adkeyneyso kaliya xaalada Soomaaliya ay iminka ku […]
Madaxweyne Shariif oo Saaka dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho
Muqdisho (AB)-Waxaa saaka garoonka diyaaradaha Muqdisho ka soo degay wafdi uu hogaaminayo Madaxweynaha Dowlada KMG Soomaaliya Sheekh Shariif kuwaasoo xalay ku hoyday magaalada Nayroobi ee Dalka Kenya Wafdiga Madaxweynaha oo maalmahaan danbe ku sugnaa Magaalada Adis-ababa ee Dalka Itoobiya ayaa […]
WASIIRKA GAASHAANDHIGA DOWLADA KMG ” Xooggaga naga soo horjeeda ilaa iyo inta ay Madatooyada qarka u saaran yihiin wax wada hadal ah lama galeyno mana saareyno ciidamada Afrika”
Muqdisho (AB):-Wasiirka cusub ee Wasaarada Gaashaanka Mr.Abuukar Cabdi Cusmaan Mardaadi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay suurtagalnimada in wada hadal ay la galaan xoogaga ka soo horjeeda islamarkaana ay ciidamada Afrikaanka ah dalka ka saaraan. Wasiirku wuxuu sheegay in Dowladu […]
Xulalka Spain iyo Holand oo isugu soo haray Fiinaalka Tartnaka Koobka Adduunka
kadib kulan adag oo xalay dhexmaray ciyaartoyda kubada cagta Dalalka Germany iyo Holand ayaa waxaa ugu danbeyn guushu raacday xulka Spain markii ay 1-0 uga adkaadeen Xulka Germany. Germany 0 – 1 Spain Ciyaarta ugu danbeysa waxaa lagu wadaa in […]
« Previous 1 … 988 989 990 991 992 … 1,022 Next »